> Resource > Talooyin > Dhigashada Maydho caruusadaha - Samee gaar ah caruusadaha Cards Martiqaad Maydho
Maalmahan dad badan dabaal qayb Roob idinkoo Shifaysan ama qubeyska arooska laba. Marka aad ka fekerayo tuuraya xisbi Roob idinkoo Shifaysan oo u saaxiib ama qoyska ama naftaada, waa inaad fiiro u badan si ay casuumaad ka Roob idinkoo Shifaysan. Oo markii samaynta kaarka martiqaad Roob idinkoo Shifaysan, haddii aad doonayo si loo badbaadiyo waqti iyo lacag, waxaad u baahan tahay oo dhan waa adeeg bixinta raqiis ah lagu marti Roob idinkoo Shifaysan oo elekterikal oo kuu ogolaanaya inaad si ay u daabac leh tayo sare leh.
Si aad u gaar ah marti show idinkoo Shifaysan oo aad, aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa in gaare card kaas oo ku siinayaa badan arrimo martiqaad Roob free elekterikal idinkoo Shifaysan oo sidoo kale ah ku dhisay-in xubno iyo wixii sawiro, stamps, mab, iwm ka your computer sida aad jeceshahay. Markaas waxaad si fudud u abuuri karaan kaar u gaar ah idinkoo Shifaysan oo Roob martiqaad la sawiro ku lifaaqan iyo saamaynta text il-qabad.
Oo weliba waxaa kaarka martiqaad Roob idinkoo Shifaysan oo ah oo macmal ah, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad kaarka video martiqaad taas oo soo jiidasho iyo cad ah. Si aad u caawin la, Wondershare DVD Muqaal dhise waa doorasho wanaagsan. Halkan waxa aad marka hore kala soo bixi kartaa software ka dibna raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Talaabada 2: shakhsiyeeyo kaarka video martiqaad. Waxaad ku dari kartaa song jecel sida music asalka, dalban saamaynta qaar ka mid ah si ay sawiro aad, ku dar qoraalka in sawir kasta iyo wixii la mid ah.